Idokethi - Ikhabhinethi yokuLoba eWaterfront
Injongo yekhabhinethi kukuthuthuzela kunye nokuphumla - iisofa ezitofotofo, itafile yepool, indawo yokuhlala ebanzi, kunye noqhagamshelo oluthe ngqo ngaphandle. Ngokuhlwa ngokuhlwa / kusasa uyonwabele ukuya ngaphandle kwi-dock ukuya kuloba okanye uhlale kwaye ubukele i-traffic kwi-Arroyo. Indawo entle yokuphumla.
*Ngenxa yobume bendawo, kukho i-intanethi rhoqo, amanzi, kunye nokucima kombane.
Iphangalele ngaphakathi nangaphandle. Ukusuka kwigumbi lokuhlala unombono omkhulu weArroyo kunye nezikhephe njengoko zihamba. Ukuba uhlala ixesha elide ngokwaneleyo uya kubona iinqanawa zihamba ukuya nokubuya kwiPort of Harlingen. Ubomi bentaka buhle. Indlu inamagumbi okulala ama-3 abanzi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, itafile yepool, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala. Inezibuko lemoto eligqunyiweyo leemoto ezimbini. Lo mhlaba unedokhi yokuloba kunye nendawo yokubeka isikhephe. Inomngxuma webbq. Emini unokuhlala ngaphandle kwi-patio kwaye ujabulele ukubukela amanzi. Ngokwenene yindawo yokuphumla
4.87 ·Izimvo eziyi-64
4.87 · Izimvo eziyi-64
Indawo yethu ikufuphi neRio Hondo. UChili Willy yindawo yokutyela yasekuhlaleni apho abantu balapha batyela khona. Kukho irempu yesikhephe sikawonke-wonke ekufutshane. I-Thomae Park imalunga neekhilomitha ezi-5 ezantsi ekupheleni kwendlela.
Sifumaneka ngokuthumela imiyalezo okanye ngefowuni. Uya kusiphendula yonke imibuzo onayo kuthi.